Muuse Suudi: Farmaajo dalkaan wanaag kama rabo | KEYDMEDIA ENGLISH
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweyne Farmaajo ayaa Muqdisho kawado heshiis isaga iyo Maamullada Daaroodka ee Puntland iyo Jubbaland u dhaxeeya, kaasoo laga saarey Beelaha Hawiye Maamulladooda, sida uu sheegay Muuse Suudi oo katirsan Senate-ka.
Isagoo ka hadlay Aqalka Sare xili uu booqasho ku joogay Shalay Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa Muuse Suudi wuxuu caddeeyay in Farmaajo uusan dalka wanaag ka rabin, islamarkaana uu hogaankiisa noqday mid beelo gaar ah loogu adeeggo.
"Annagu waxaan aragnaa Heshiis Hawiye aan qeyb ka ahayn inuu meesha ka socdo, waxaana samaynaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dalkaan wanaag ka rabin, ku tagri-falkii uu nagu tagri-falaayay ayuu nagu hayaa" ayuu yiri Muuse Suudi Yalaxow.
Hadalka Muuse Suudi ayaa imaanaya iyadoo Muqdisho ay ku kulmayaan Farmaajo, Deni iyo Axmed Madoobe, iyadoo aan shirkooda ku casuumin Madaxda Maamullada HirShabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug, taasoo dad badan u arkaan qorsho qabyaaladaysan.
Wadahadallada ayaa lagu soo beegay xili aan dalka ka jirin Xukuumad rasmi ah, islamarkaana Madaxweynaha magacaabin Ra'iisul Wasaarihii qaban lahaa shaqooyin marxaladda kala-guurka looga baxayo, oo doorasho lagu gaarsiinayo Soomaaliya.
Su'aalaha dadka is-waydiinayaan ayaa ah muxuu Farmaajo u daahiyay magacaabista Ra'iisul Wasaaraha?, muxuu yahay qorshaha uu ka damacsan yahay?, yaase fulin doonin heshiisyada laga gaarayo doorashooyinka?
Xaaladda kala-guur amnigii ayaa faraha ka baxay, musuq-maasuqii ayaa xargaha goostay, waxaana joogsatay shaqadda dowladda, iyadoo Farmaajo lagu eedeeyay inuu mas'uul ka yahay, maadaama uusan diyaar u ahayn inuu RW magacaabo, sidoo kalena doorasho dhacdo.
Comments Topics: aqalka sare axmed madoobe cabdi xaashi deni farmaajo muuse suudi
Bossaso battle death count continues to rise
News 23 December 2021 18:51